ရာသီဥတု, မိုးလေဝသ, အချိန်ဇုန် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ရာသီဥတု, မိုးလေဝသ, အချိန်ဇုန်
ရုရှားကသဲကန္တာရဧရိယာ၌တည်ရှိရာ? Archeda-ဒွန်သဲပု Volgograd ဒေသ၏ Serafimovich နှင့် Frolovsky ခရိုင်အတွင်းတည်ရှိသည်။ ဧရိယာ Achredinsko-ဒွန်သဲအကြောင်းကို 200 တထောင်ဟက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Tsimlyansky သဲတည်ရှိသောနေကြသည် ...
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအချို့ဒေသများနှင့်အဘယ်ကြောင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်? အဘယ်အရာကိုသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အစီအမံ? လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာကအမိုးမိုးအမေရိကား, ရုရှား, တရုတ်, အင်္ဂလန်အဖြစ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံများကိုရရှိခဲ့သည့်အခါ ...
ဘယ်ရုရှားမြို့မှာဆောင်းတွင်းမရှိလဲ။ ရုရှားတွင်ပူနွေးသောရာသီဥတုရှိသောဒေသသည် Krasnodar နယ်မြေ၏တောင်ဘက်၊ အထူးသဖြင့် Sochi ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအပူချိန် 14,2 C သည်ပျမ်းမျှအပူချိန်ရှိသည်။
အင်္ဂလန်မှာရာသီဥတုကဘာလဲ စိုစွတ်သောအအေး။ အလယ်အလတ်သမုဒ္ဒရာ၊ ရာသီဥတုသည်အဓိကအားဖြင့်ပူနွေးသောသမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အအေးဆုံးလသည်ဇန်နဝါရီဖြစ်သည် (+3C မှ…)
ရာသီဥတုအဲဂုတ္တုပြည်၌ဖေဖော်ဝါရီလ, ဇန်နဝါရီလအတွင်းကဘာလဲ? ဒါမှမဟုတ်သွားကြဖို့ပိုကောင်းလာသောအခါဖြစ်သနည်း
အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာရာသီဥတုဘယ်လိုရှိသလဲ။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်အချိန်မှာစီးရတာပိုကောင်းသလဲ။ အီဂျစ်တွင်အားလပ်ရက်များ 1 မှဒီဇင်ဘာ 20 သို့ဒီဇင်ဘာလတွင်အီဂျစ်နိုင်ငံရှိအားလပ်ရက်များ - ရာသီမကုန်မီ။ စျေးနှုန်းကအရမ်းနိမ့်တယ်၊ ဟိုတယ်တွေ ...
ကျေးဇူးပြု၍ အစီအစဉ်အရသြစတြေးလျ၏ကယ်ဆယ်ရေးကိုဖော်ပြရန်ကူညီပေးပါ။ သြစတြေးလျသည်အကြီးဆုံးtheရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝတရား၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာသဲကန္တာရကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်သည်သဘာဝသယံဇာတများပေါကြွယ်ဝသည်။
ဝက်ခြံအစက်အပြောက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။ Tali နှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ ... မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကအလွန်ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာသူတို့တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ပြbadagနာဟာအလှကုန်ပစ္စည်းရှိရင် "Tali with recipes" ကိုရှာဖွေပြီးကူညီလိမ့်မယ်။
မော်စကိုနှင့် Vorkuta အကြားဘယ်နှစ်ယောက်နာရီခြားနားချက်?
အပေါ် Posted 02.09.2018 18.09.2018
မော်စကိုနှင့်ဗော့ကူတာအကြားနာရီမည်မျှကွာခြားသနည်း။ သူတို့သည်မော်စကိုအချိန်အရ Vorkuta တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဤမြို့များသည်3အချိန်ဇုန်များကိုမျှဝေသည်။ မော်စကိုတွင် 12.00၊ ထို့နောက်ဗော့ကူတာတွင် - 15.00 ။ အချိန် ...
ငါမိုးသည်းထန်စွာဆီးနှင်းသည်အဘယ်အရာကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်ပါ - ကမရှင်းလင်းပါဘူး။
ငါမိုးသည်းထန်စွာဆီးနှင်းသည်အဘယ်အရာကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်ပါ - ကမရှင်းလင်းပါဘူး။ ဝီကီပီးဒီးယားကဘာကိုကူးယူနေတာလဲ။ ထိုသူသည်မရှင်းလင်းသောရေးသားထားသောမုန်တိုင်းနှင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြစ် Tabola ၏အရင်းအမြစ်သည်အဘယ်မှာရှိ
ဘယ်မှာ Kustanai ဒေသတွင်း၌ azahstane အားဖြင့် Tabola အတွက်မြစ်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်၏အကြီးဆုံးမြစ်လက်တက်: Uy, Iset, Tura, Tavda, Ubagan ။ အဆိုပါ Tobol မြစ်၏အရင်းအမြစ်တောင်ပိုင်း Urals ၏အရှေ့ပိုင်းစပါး၏နယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည် ...
ပဲရစ်, ပြင်သစ်ထဲမှာဘယ်အချိန်ပါလဲ? အခုတော့ 16: 13 သို့သျောလညျးအမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင်တွေ့ဆုံရန်! မိုက်မဲ။2နာရီမော်စကိုထက်လျော့နည်း http://www.timeanddate.com/worldclock/full.html http://logic-bratsk.ru/term/pogoda.php?key=p8Точноеအချိန်တွင်ယခုသငျသညျအထဲကစစျဆေးနိုငျ ...
သငျသညျယခုကြှနျုပျတို့နထေိုငျသောအရာကိုပြက္ခဒိန်ပေါ်သိလား? သင်ပိုမိုသိကျွမ်းဘယ်ပြက္ခဒိန်? Sechas ကျနော်တို့ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန် (အသစ်စတိုင်) အရတော်လှန်ရေးမှီ, Gregorian (အဟောင်းစတိုင်) တွင်နေထိုင်ခဲ့နထေိုငျ ...
လတစ်လရဲ့လွှဲခွင်တွက်ချက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဤတွင်အားလုံးအဆင့်ဆင့်: သင်ကိုယ်သင်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ် diurnal အပူချိန်၏လွှဲခွင်။ လိုအပ်သောတိုင်းတာသုံးပါ။ မိုးလေဝသဘူတာပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါပြင်ပအပူချိန် 8 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်တိုင်းတာသောက ...
တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသည်ပျမ်းမျှအပူချိန် 45 - -60 ဒီဂရီ၊ တောင်ဘက်တွင် --- 60 - 80 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းပတ်လည်အပူချိန်သေချာတယ် ...
ယင်းဝင်ရိုးစွန်းညဥ့်ကဘာလဲ? ဝင်ရိုးစွန်းနေ့က? White က Nights? သူတို့ဘယ်လိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွာခြားသလဲ? ဘယ်အချိန်မှာအဘယ်မှာဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရုရှားနိုင်ငံရှိသနညျး
ဝင်ရိုးစွန်းညဥ့်ကဘာလဲ ဝင်ရိုးစွန်းနေ့က? ညဖြူ? သူတို့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ရုရှား၌ဤအမှုအလုံးစုံတို့သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ google-search "polar day", "polar night", "white night" ...
ပြည်သူ့ငါ့ကိုပထဝီပေါ် table ထဲမှာဖြည့်ပါကကူညီ ...
ပြည်သူ့ငါ့ကို ... ပထဝီပေါ် table ထဲမှာ Dima ဖြည့်ပါကကူညီခြင်းနှင့်သင်လုပ်နိုင်သည်အားလုံး # လုပ်ပါတော့တယ်ရန်နှင့်ဒါကြောင့်အရာ၏သဘာဝအဧရိယာလာဦးခေါင်းသူ့ဟာသူတစ် shit ယူရန်လိုအပ်သောပါသလဲ ဒါကြောင့်အပေါ်ရာသီဥတုအပူချိန်နှင့်။ စသည်တို့ .. ဘယ်အရာကို ... ?
အပူပိုင်းနှင့်အပူပိုင်းရာသီဥတုဇုန်များကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ + Subtropics - ကမ္ဘာမြေ၏ရာသီဥတုဇုန်။ အပူပိုင်းဒေသသည်အီကွေတာနှင့်အလယ်လတ္တီတွဒ်တွင်တည်ရှိသောအပူပိုင်းဒေသများအကြားတည်ရှိသည်။
အာဖရိကအာဖရိကရှိရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနဲ့နွေရာသီ၏ပျှမ်းမျှအပူချိန်ကမ္ဘာလုံး၏အပူဆုံးတိုက်ကြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အပူပိုင်းနှင့်အီကွေတာလတ္တီတွဒ်တွင်တည်ရှိသည်, ထို့ကြောင့်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည် (တစ်သိသိသာသာငွေပမာဏအားလက်ခံတွေ့ဆုံဖြစ်ပါတယ် ...
အဘယ်မှာရှိတိုက်တန်းနစ်ထဲမှာနစ်မြုပ်?41912 ဧပြီလအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏မြောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်န်းကျင်သန်းခေါင်မှာသုံးရာမိုင်အရှေ့တောင်ဘက်နယူးဖောင်လန်ကျွန်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးရေကြောင်းဘေးအန္တရာယ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေ၏ ...
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌နိုဒါကိုအတွက်ရာသီဥတုဆိုတာဘာလဲ ??? အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအချက်အလက်များ၏? ဟုတ်ကဲ့ esch ထိုကဲ့သို့သောအယူမှား? ယောက်ျားတွေ, သငျသညျ, ယေဘုယျအတွက်နိုဒါကိုရှိကြ၏နေကြသနည်း ဆောင်းရာသီတွင်ကျွန်တော် -8 -10 ??? ဒီဖြစ်ပျက်သည့်အခါဖြစ်သနည်း ဒီဂရီအများကြီးနိမ့်ဖြစ်ပါတယ် ...
50 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,255 စက္ကန့်ကျော် Generate ။